कुन ग्रेडमा कति उतिर्ण-कती अंक ल्याउने कुन ग्रेडमा ? हेर्नुहोस « News24 : Premium News Channel
कुन ग्रेडमा कति उतिर्ण-कती अंक ल्याउने कुन ग्रेडमा ? हेर्नुहोस
भक्तपुर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानोठिमीले २०७२ सालको एसएलसी परीक्षाको नतिजा आज सार्वजनिक गरेको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद काप्रीले एसएलसीको नतिजा एसएमएस, आइभिआर र वेबसाइटमा थाहा पाउन सकिने जानकारी दिनुभयो । इन्टरनेटबाट हेर्न नसक्नेले एसएमएसबाटै परिणाम हेर्न सक्नेछन् । रासस